Puntland Voice – Page 1029 – Codka Dalka iyo Dadka
Askarta Kenya oo mar kale xanibaad saartay Xaduud beeneedka ku teedsan Magaalooyinka Mandheera iyo B/xaawo.
Wararka ka imaanaya Magaalada Baladxaawo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada Kenya ay mar kale qaqabasho iyo xarig isugu dareen Soomaalida ku dhaqan lmagaalada Mandheera ee ku taal xuduudka Beeneedka Kenya iyo Soomaaliya. Qab qabshada dadka soomaaliyeed ayaa saameyn […]
FAYSAL CALI WARAABE "Shariif wuxuu ka been sheegay Kitaabka iyo Maxaakiimtii Islaamka,waxa uu rabayna waxay ahayd kaliya inuu kursi ku fadhiisto"
Hargeysa (AB):-Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ku ah Maamulka Somaliland ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa eedeyn kulul u jeediyay Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sh.Shariif isagoo ku eedeeyay inuu xukun raadis ahaa intii uu ka tirsanaa Maamulkii Maxaakiimta Islaamka islamarkaana aysan ka […]
Gudoomiyaha Degmada Xamar Jajab oo ku eedeeyay Ciidamada Miltaraiga Dowlada KMG inay mas'uul ka yihiin dagaaal shalay askar badani ku geeriyootay .
Cabdi Baasid Maxamed Xasan oo ah Gudoomiyaha Degmada Xamar jajab ayaa si kulul uga hadlay dagaalo shalay degmadaasi ka dhacay kaasoo dhexmaray Boliiska iyo Milatari dhawaan Dalka Uganda laga keenay kaasoo sababay geerida in ka badan 5 asartii dagaalameysay ka […]
Natiijada Kulamadii shalay iyo Xalay la ciyaaray Ciyaaraha aduunka.
Waxaa shalay iyo xalay la ciyaaray 3 kulan oo ka tirsan tartanka ciyaaraha koobka Adduunka ee ka socda Dalka Koonfur Afrika. Kulankii ugu horeeyay waxaa uu dhexmaray Xulalka Korea Republic iyo Greece waxaana uu ku soo idlaaday 2-0 oo ay […]
Bandow Xalay ka dhaqan galay Magaalada Guri-ceel ee Gobolka Galgaduud
Guri-ceel (AB):-Waxaa Xalay si rasmi a uga dhaqan galay Magaalada Guri-ceel ee Gobolka Galgaduud bandow ay halkaasi ku rogeen Maamulka Ahlu suna ee halkaasi ka taliya. Ujeedka Bandowga ayay ku sheegeen Ahlu suna inay amniga ku xaqiijinayaan sida wark ay […]
Natiijada Kulamadii shalay iyo Xalay la ciyaaray Koobka Adduunka (Kulamada Maanta)
Waxaa shalay iyo xalay la ciyaaray 3 kulan oo ka tirsan tartanka ciyaaraha koobka Adduunka ee ka socda Dalka Koonfur Afrika. Kulankii ugu horeeyay waxaa uu dhexmaray Xulalka Korea Republic iyo Greece waxaana uu ku soo idlaaday 2-0 oo ay guushu ku […]
Xoogaga Islaamiyiinta Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyo Xisbul Islaam ee B/weyne oo Maanta midoobey.
Baladweyne (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalada B/weyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Maanta ay midoobeen Xoogaga Islaamiyiinta ee Mujaahidiinta Alshabaab iyo Ururka Xisbul Islaam kuwaasoo iskula sugnaa Magaalada. Wararka ayaa tilmaamaya in guud ahaan Ciidamadii Xisbul Islaammgawaaridoodii dagaalka iyo saraakiishii […]
WAR DEG DEG AH: Xeer ilaaliyihii Gobolka Bari oo goor dhow oo Maanta ah lagu dilay Boosaaso
Warar aan goor dhow ka helnay Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay Xeer Ilaalihii guud ee Gobolka Bari ee Maamulka Puntland Col.Jamac Cali. Wararka ayaa intaasi ku daraya in Sarkaalka la dilay wiil uu dhalay iyo mid ilaaladiisa […]
Boliiska iyo Milatariga Dowlada KMG oo mar kale Maanta Muqdisho isku rasaaseeyay
Muqdisho (AB):-Iska hor imaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta mar kale egmada Xamar jajab ee Magaalada Muqdisho ku dhexmaray Ciidamo ka kala tirsan Boliiska iyo Milatariga Dowlada KMG Soomaaliya. Sida dadka deegaankaasi sheegayaan ilaa 3 qofood oo 2 askarta […]
Soomaalida tahriibka ku galeysa Dalka Mareykanka oo aad u batay sanadkaani.
Sarkaal u hadlay Ciidamada Boliiska Dalka Mareykanka ayaa sheegay inay qabteen Soomaali badan kuwaasoo tahriib ahaan ku galay dalkaasi iyagoo ka soo talaabay Xuduuda Dalka Mexico. Soomaalida gashay dalkaasi sedexdii bilood ee u danbeysay ayuu saraalkaasi ku sheegay inay gaarayaan […]
« Previous 1 … 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 … 1,044 Next »